တောင်ပေါ်က တယောသံ (ဇာတ်သိမ်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောင်ပေါ်က တယောသံ (ဇာတ်သိမ်း)
တောင်ပေါ်က တယောသံ (ဇာတ်သိမ်း)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Nov 26, 2012 in Creative Writing | 18 comments
ကျေးဇူးတင်လွှာ ။ ။ ကျနော် ရေးသားတဲ့ “တောင်ပေါ်က တယောသံ” ဝတ္ထုဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းပို့စ်များတွင် လာရောက်ကာ အားပေးသွားကြပါကုန်သော “ကြည်ဆောင်း၊ Mon Kit ၊ Candle. ၊ ရောင်းရင်းကြီး၊ မခိုင်ဇာ၊ မောင်ဗိုက်၊ မရွှေအိ၊ ဦးကြီးမိုက်၊ ဖေပေါက်ကြီး၊ အန်တီအိ၊ ကိုရွာစား၊ အန်တီမမ၊ မမွန်မွန်၊ ဂျီးဒေါ်ပုခ်ျ၊ ကိုလင်းဆက်၊ အရီးလတ်၊ Guest ၊ ရွှေအိမ်စည်၊ မနိုဗွီ၊ ဦးဆာမိ၊ ရာဇဝင်လူဆိုး၊ ဦးကြောင်ကြီး၊ ဦးမာဃ၊ ဂျူးဂျူးမ၊ အန်တီဝေ” တို့အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။ မှတ်ချက် (comment) မရေးသွားကြပါသော်လည်း တိတ်တိတ်ကလေး ဖတ်ရှုကာ ထွက်သူများကိုလည်း ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း။
ပန်ကြားလွှာ ။ ။ “တောင်ပေါ်က တယောသံ” ဟူသော ပို့စ်ဇာတ်လမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန် အကြံပြုချက်များကို စာရှုသူများထံမှ တောင်းခံအပ်၊ ပန်ကြားအပ်ပါကြောင်း။
ယခုပို့စ်သည် နောက်ဆုံး (ဇာတ်သိမ်း) ဖြစ်ပါသဖြင့် ရှေ့မှ အပိုင်းများကို ဖတ်ရှုလိုသူများအတွက် အောက်တွင် လင့်ခ်များ ပေးထားပါသည်။
တောင်ပေါ်က တယောသံ – ၁
တောင်ပေါ်က တယောသံ – ၂
တောင်ပေါ်က တယောသံ – ၃
တောင်ပေါ်က တယောသံ – ၄
ဇာတ်သိမ်းခန်းကို တ၀ကြီးဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် အရေးအသားစွဲဆောင်အားကောင်းလို့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖတ်လိုက်ရပါကြောင်း …
အန်တီဝေ ခင်ဗျာ …
ပထမဆုံး ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ …
အရေးအသား စွဲဆောင်အားကောင်းတယ် .. ဆိုတာဂျီးဂဒေါ့ ..
အဟီး … ဟုတ်လောက်ဘာဘူး ခည …
အနော်က အာပလာ ကောင်မို့ပါ ..
ကြောင်နက်အုပ်စု နဲ့ ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းနဲ့ ဆက်စပ်များနေမလား.. :hee:
ဒီတစ်ခါတော့ လှပပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါဘဲ…
ဒါပေမဲ့ ဗြဟ္မာမောင်မောင် အကြောင်း နည်းနည်းလေးပြောပြရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်…
မင်းနန္ဓာ ဆိုတော့လည်း ..
အင်း .. မင်းနန္ဓာ .. ပေါ့နော် ..
ကြောင်နက်အုပ်စုနဲ့ ကြောင်ဝတုတ်နဲ့က တစ်ဂိုဏ်းထဲရယ် ..
အိုက်လူဂျီးကို ဖမ်းဖို့ ဆိုပြီး ဝရမ်း ထုတ်ထားတယ်လို့လည်း ကြားမိတယ် ..
ဖမ်းမိရင် .. ဆုတော်ငွေ .. ဆယ်သိန်း ဆိုလားပဲ ..
@ Mon Kit
အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျား …
ဗြဟ္မာမောင်မောင် အကြောင်းကို ပြောပြမှာပါဗျား ..
ဂယ်က နောက်ထပ် ရေးဖို့အတွက် ဂွင်ဆင်ပြီး ထည့်လိုက်ဒါပေါ့လို့ .. အဟီးးးး
အော.အော.. လူဇိုးဘဲ….. :hee:
သကြားပုလင်းအံစာ ရေ ..ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမျှော်ရတာကြာပေမဲ့ တင်လာတော့လည်း အများကြီးမို့ ကျေနပ်စွာ အားပေးသွားရင်း….နောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အမြန်တင်နော်….
ဘယ်လို ဇါတ်သိမ်းမလဲ လို့ စောင့်နေတာ
တစ်ခါမှ မသိခဲ့တာကို ရေးပြသွားတာပဲ
ပထမပိုင်းက ပိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းက ကြိုသိနေတယ် အဲ့လိုလာမယ်ဆိုတာ ။ နောက်ခါကျရင် မထင်မှတ်တဲ့ထောင့်ကနေ ဇာတ်သိမ်းကြည့်ပါ့လား။
နောက်ပြီး ဇာတ်လမ်းတွေဆို ဆက်တိုက်တင်ပေးပါအေ။
စောင့်ဖတ်လိုက်တော့ ဇာတ်ရှိန်လျော့သွားလို့ ။
ကျုပ်ထင်တာ တက်တက်စင်အောင်လွဲပါပေါ့ လား ကိုရင်အံ ရေ
ဟဲ ဟဲနောက်ဆိုဇတ်ကိုမမှန်းရဲတော့ ဝူးးးးးးးးးး
ကောင်းပါလေ့ ဗျာ ……….နောက်တစ်ချီ ကိုစောင့် နေပြီဗျို့  ………
စ-ဆုံး ၂ရက်ခွဲ ဖတ်သွားပါတယ်…ဖတ်လို့ကောင်းတယ်နော်..
အပိုင်း ၃ပိုင်းလောက်နဲ့ရက်သိပ်မခြားဘဲတင်ရင် ဇာတ်ရှိန်မလျော့ဘဲ ပိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ…
တယောထိုးတဲ့လူက လူပဲဖြစ်ရမယ် ဆိုတာလေးပါ….
ဒီတစ်ခါဆုံးအောင်ရေးပေးလို့ ဆုံးအောင်တော့ဖတ်လိုက်ရသား …
ဗြဟ္မာမောင်မောင် ဆိုတာ သူလား
သူက ဒီမှာမပေါ်ခင်ကတည်းက ဝေဇယန္တာမှာ လာအော်သွားပြီ
မှတ်ချက်။ ။ ဝေဇယန္တာ= ဦးမာဃ၏ နတ်နန်း
ဇာတ်သိမ်းတွားဘာဘီ ခညာ …
နောက်တစ်ပုဒ် မျှော်နေမယ်ဆိုလို့လည်း ဝမ်းသာရပါရဲ့ ခညာ ..
ကျေးဇူးပါ ခညာ …
နောက်များလည်း လာရောက်ပြီး အားပေးတော်မူပါဦးလို့ ..
နောက်တပုဒ် မျှော်မနေနဲ့ဦး …
မမယ်မ က မျှော်နေပီ …
နောက်တာပါ ခညာ ..
အားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါ …
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခဗျာ …
တခုတ်တရ အားပေးသွားတဲ့ Candle ကို
နောက်တစ်ပုဒ်လည်း မြန်မြန် တင်ပါမယ်လို့ …
ဟုတ် .. ဒီလိုပါ …
ဘယ်လို ဇာတ်သိမ်းမလဲလို့ စောင့်နေတာ ဆိုတာကို
သိရလို့လည်း ဝမ်းသာမိပါရဲ့ဗျာ …
ကျေးဇူးပါ ရောင်းရင်းကြီး ခညာ ..
ဟုတ်ကဲ့ပါ အမ ခင်ဗျာ ..
နောက်တစ်ပုဒ်ကျရင် မထင်မှတ်တဲ့ ထောင့်ကနေ
ခုလို အကြံပြုတဲ့ အမပုခ်ျ ကို ကျေးဇူးပါ …
ခညားက ဘီလို ထင်လို့တုန်းဂျ ..
အဲ… စကားမစပ် ..
အားပေးတဲ့လူတွေ ရှိနေတာ ..
ကျုပ် စာအုပ် ထုတ်လိုက်ရင်တောင် ကောင်းမလားလို့ …
ကျေးဇူးပါ ဦးဆာမိကြီး …
နှစ်ရက်ခွဲတောင် ဖတ်သွားတာလားဗျ …
ကြိုးစား ရေးသားပါ့မယ် ခင်ဗျာ ..
အားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါနော့ …
ဒီတစ်ခါလည်း တိုးလို့တန်းလန်း ထားရင်
ကျုပ်ကို ဝိုင်းဆော်ကြတော့မယ် ထင်တယ် ..
ပြီးအောင် ရေးလိုက်ရတာ ..
ဦးမာဃကြီးက မှတ်မိသားဗျ …
အဲဒီတုန်းက နာမည်လေးကို လာပြီး မိတ်ဆက်တာပေါ့ဗျာ ..
အားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ ..
ဟာဂျာ… တကဲ့သရဲမှတ်လို့ ဦးခိုင်ကို ထေ့ဖို့အကွက်ရပီမှတ်တာ လူဇိုး အရက်သမား ဆေးသမား ကစော်သား…